रोचक Archives - Page 54 of 77 - Taja Report
ओली सरकारले जनताको ढाड सक्ने गरि गरेको मूल्य वृद्धि किन घटेन : खानेतेल लिटरमै २० रुपैयाँ , मैदाको मूल्य १० रुपैयाँ
July 18, 2018 Comments Off on ओली सरकारले जनताको ढाड सक्ने गरि गरेको मूल्य वृद्धि किन घटेन : खानेतेल लिटरमै २० रुपैयाँ , मैदाको मूल्य १० रुपैयाँ
काठमाडौं। बजेटबाट राजस्वको दर हेरफेर हुँदा खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको छ। कृषिजन्य वस्तुमा दिर्इँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) फिर्ता हटाउने र केही खाद्य वस्तुमा अन्तशुल्क लगाउने निर्णयले मूल्य बढेको हो।अहिले बजारमा खानेतेल र ड्राइफूडको मूल्य [ पुरा पढ्नुहोस ]
यी विधुवा महिला डाक्टर : जसले ८० भन्दा बढी विवाहित परपुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखिन् (पढ्नुहोस् उनको दर्दानाक कथा )
July 18, 2018 Comments Off on यी विधुवा महिला डाक्टर : जसले ८० भन्दा बढी विवाहित परपुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखिन् (पढ्नुहोस् उनको दर्दानाक कथा )
बेलायतकी एक महिलाले आफूले ८० भन्दा बढी विवाहित परपुरुषसँग यौन सम्बन्ध कायम गरेको खुलासा गरेकी छन् । ४३ वर्षीया लुइस वैन डर भेल्डे नाम गरेकी ती महिलाले डाक्टर पतिको मृत्युपछि आफूले परपुरुषसँग यौन सम्बन्ध राख्न [ पुरा पढ्नुहोस ]
अर्बपतिसँग विवाह गरी मोजमस्ती गर्दै बलिउडका यी फ्लप अभिनेत्रीहरु
July 17, 2018 Comments Off on अर्बपतिसँग विवाह गरी मोजमस्ती गर्दै बलिउडका यी फ्लप अभिनेत्रीहरु
एजेन्सी । बलिउडमा अभिनेत्रीको करियरको समयावधि कम हुन्छ। हरेक वर्ष थुप्रै अभिनेत्रीहरु आउँछन् र जान्छन्। यद्यपि केही अभिनेत्री हिट पनि साबित हुन्छन तर केही फ्लप भई विवाह गरी घर बसालेर बस्छन्। त्यस्तै यी अभिनेत्रीहरु फिल्म [ पुरा पढ्नुहोस ]
सेक्समा आवश्यकता भन्दा वढी उत्तेजित हुदाँ भयो यस्तो हालत !
July 17, 2018 Comments Off on सेक्समा आवश्यकता भन्दा वढी उत्तेजित हुदाँ भयो यस्तो हालत !
एजेन्सी । सेक्सलाई असामान्य र रोमान्चक बनाउन खोज्दा दुर्घटना भएका थुप्रै समाचारहरु सुन्न पाइन्छ । फेरी यस्तै एक घटना चर्चामा आएको छ । सेक्स सिटीका रुपमा प्रख्यात थाइल्याण्डको बैंककमा एकजना यौनकर्मी र उनका ग्राहकबीच यौनसम्पर्कका [ पुरा पढ्नुहोस ]
बिहान उठ्दा खेतमै विमान आएर बसेपछि गाउले झन्डै बिहोस
July 17, 2018 Comments Off on बिहान उठ्दा खेतमै विमान आएर बसेपछि गाउले झन्डै बिहोस
बिहान उठ्दा खेतमै भीमकाय विमान आएर बसेपछि गाउले झन्डै बिहोस एजेन्सी : निद्रा खुलेपछि घरको ढोकामै एक भिमकाय बोइङ देखियो भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्ने मात्रै होइन बेहोसै हुने सम्भावना रहन्छ । यस्तै किसिमको घटना थाइल्यान्डको [ पुरा पढ्नुहोस ]
हरियो चुरा… ‘माया’, ‘प्रेम’, ‘स्नेह’, ‘समर्पण’ र ‘भक्ति’ जसको लागि हरियो चुरा र रातो सारी चाहिन्न।
July 17, 2018 Comments Off on हरियो चुरा… ‘माया’, ‘प्रेम’, ‘स्नेह’, ‘समर्पण’ र ‘भक्ति’ जसको लागि हरियो चुरा र रातो सारी चाहिन्न।
अमृता लम्साल | १ वर्ष अघि साउन २४, २०७३ उनी आइन्। देखेँ, दाहिने हातभरि रातो र हरियो मिसिएको दुई दर्जन चुरा लगाएकी रहिछन्। हाँस्दै सोधेँ, ‘ओहो, किन यत्तिका चुरा लगाएको नि आज?’ उनले दँग परेर [ पुरा पढ्नुहोस ]
किन लगाउँछन् साउनमा हरियो चुरा र मेहेन्दी ?
July 17, 2018 Comments Off on किन लगाउँछन् साउनमा हरियो चुरा र मेहेन्दी ?
साउनको सुरुवातसँगै धेरैजसो महिलाका हात मेहन्दी र रंगीबिरंगी चुराले सजिएको देख्न सकिन्छ । साउन महिना नेपाली हिन्दु नारीहरुका लागि विशेष महत्वको महिना हो । यो महिना भर महिलाहरु रंगीन हुन्छन् । हरियो, रातो, पहेंलो चुरा, [ पुरा पढ्नुहोस ]
July 17, 2018 Comments Off on तपाईको फोन सक्कली कि नक्कली कसरी थाहा पाउने ? यहाँ छन् थाहा पाउने बिधि
देख्दा दुरुस्तै देख्दैमा त्यस सामानको गुणस्तर एउटै नहुन सक्छ । हामी मोवाइल चलाउन त जान्दछौ तर हामीहरुलाई आफूले बोकेको मोबाइल सक्कली हो कि नक्कली भन्ने छुट्याउन अत्यन्तै कठिन हुन्छ ।मोबाइल किन्ने बेलामा त मोबाइल पसलेले [ पुरा पढ्नुहोस ]
अाज साउने संक्रान्ति, आजबाट सुर्य कर्कट राशिमा प्रवेश गर्दै .. कस कसको भाग्य चम्कन्छ ?
July 17, 2018 Comments Off on अाज साउने संक्रान्ति, आजबाट सुर्य कर्कट राशिमा प्रवेश गर्दै .. कस कसको भाग्य चम्कन्छ ?
सूर्य कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने दिन भएकाले यो दिनलाई कर्कट संक्रान्ति पनि भनिन्छ। निरयण सिद्धान्तअनुसार सूर्य दक्षिणायन हुने भएकाले ज्योतिष तथा धर्मशास्त्रमा यो दिनलाई महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा लिइन्छ। साउने संक्रान्तिसँगै नेपालीहरूको अधिकांश चाडपर्व सुरु हुने [ पुरा पढ्नुहोस ]
तपाइँलाई थाहा छ ? आफ्नै औंलाले शरीर नाप्दा आफ्नो आयु थाहा हुन्छ
July 17, 2018 Comments Off on तपाइँलाई थाहा छ ? आफ्नै औंलाले शरीर नाप्दा आफ्नो आयु थाहा हुन्छ
शास्त्रमा भनिएको छ कि हरेक ब्यक्तिको जन्मका साथ नै मृत्यु पनि तय हुन्छ । हरेक मानिसले जन्मसँगै मृत्युको मिति समेत लिएर आएको हुन्छ । यद्यपी यो जीवन र मृत्युको रहस्यबारे भविष्यवाणी भने हरेक मानिसलाई चासोको [ पुरा पढ्नुहोस ]